(Waxaa laga soo toosiyay Masiixi)
Masiixiyiinta runta ah siyaasadda kama qaybqaataan.
Masiixiyiinta runta ah naar ma aamminsana.
Masiixiyiinta runta ah waxay isula dhaqmaan sidii walaalayaal.
Masiixiyiinta runta waa inay si qiyaasan khamriga u cabaan.
Masiixiyiinta runta waxay ku dadaalaan inay Kitaabka ku dhaqmaan.
Masiixiyiinta runta waa inay si taxaddar leh u doortaan madaddaalkooda.
Masiixiyiintu runta waa inay iska ilaaliyaan inay dadka wax xun ku sameeyaan.
Masiixiyiinta runta waa inay bartaan inay nacaan wuxuu Ilaahay neceb yahay.
Masiixiyiintu runta waa inay bartaan inay jeclaadaan wuxuu Ilaahay jecel yahay.
Masiixiyiintu runta dagaallo kama qaybqaataan.
Masiixiyiintu runta ahi way rumaysan yihiin aayadaha waxay caddeeyaan inuu Ilaahay saddex ahayn, Magaca Ilaahay waa Yehowah. Ilaahay wuxuu ballanqaaday inuu dunida janno ka dhigi doono. Nebi Ciise iskutallaab kuma dhiman. U sujuudka iskutallaabta waa sanam caabudid.
Afarta "Injiil" ee qaanuuniga ah waa afarta buug oo yihiin afarta nin oo la kala yiraahdo: Matayos, Markos, Lukos, iyo John oo ay u yaqaannaan kiristaanku (Yooxana). Sababta ay buugaastaas laf-dhabarka ugu noqdeen caqiidada kiristaankana waa ayadoo sannadkii 325kii miilaadka, lagu ansixiyay afartaas buug shir diineed ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaashii kiristaanka ee xilligaas. Shirkaas oo loo yaqaan (Council of Nicea)¹. Waxaa shirkaas in la'isugu yimaado sabab u ahaa ayadoo ay jirtay dood adag oo kiristaankii xilligaas jiray ka dhex taagnayd. Doodaas oo ku saabsanayd ilaahnimada nabi Ciise (nabadgalyo dushiisa ha ahaatee). Waxaana la'isku haystay Ciise waa ilaaا iyo ilaah ma'ahane wuxuu ahaa qof abnii-aadam ah oo Ilaahay uu soo diray.
Shirku wuxuu ku dhammaaday go’aamadii ugu muhiimsanaa: garashada ilaahnimada Ciise Masiix (waxbaridda aan kitaabka ahayn) iyo ahaanshaha Wiilka Ilaah.
Masiixinnimada runta ahEdit
Markhaatiyaasha Yehowah Kirishtaan Ma Yihiin?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Masiixiyad&oldid=218732"
Last edited on 8 Oktoobar 2021, at 23:57
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Oktoobar 2021, marka ee eheed 23:57.